Sawirro: Wafdi Puntland ah oo wata ciidan badan oo gaaray gobolka Sool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Wafdi Puntland ah oo wata ciidan badan oo gaaray gobolka Sool
A warsame 5 May 2015 6 May 2015
Mareeg.com: Wafdi ka socda maamulka Puntland oo ay ilaalinayaan ciidamo farabadan ayaa gaaray deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool, islamarkaana ah halka maamulka puntland u adeegsado sida xarrunta gobolka Sool, maadaama Laascaanood gacabta ugu jirto maamulka Somaliland.
Wasiirka arrimaha gudaha, Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) wasiirka Amniga, Xasan Cismaan Maxamuud Alloore, xildhibaano iyo taliyaha ciidanka Puntland, Saciid Dheere ayaa ka mid ah wafdiga gaaray halkaas.
Mas’uuliyiintan ayaa la sheegay iney u tageen halkaas sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda amaan ee deegaanada ay maamulka Puntland ka joogaan gobolka Sool.
Wafdiga maamulka Puntland oo muddo kooban joogay deegaanka Tukaraq ayaa dib ugu noqday Garowe, kadib markii ay la kuleen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Deegaanada Sool ayaa waxaa inta badan ku loollama maleeshiyaad ka kala socda Somaliland, Khaatumo iyo Puntland, iyado dadka deegaanku kala taabacsan yihiin.
Wasaaradda waxbarashada & guddi baarlaman oo ka dooday Imtixaan mideysan!
Madaxweyne Xasan: Muddo kororsi ma sameyneyno, doorashana waa la qabanaa 2016